Khilaaf soo kala dhex galay guddiga doorashada Galmudug | KEYDMEDIA ENGLISH
Khilaaf xooggan ayaa ka dhex aloosmay, guddiga doorashada Galmudug, waxaana ka soo baxaya xubnaha guddiga waraaqo is diiddan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Khilaafka hareeyey guddiga doorashada Galmudug ayaa sababay, in xubno ka tirsan guddiga ay kulan yeeshaan, isla markaana ay xilka ka qaadaan gudoomiyihii guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedkaas.
Xubnaha sheegay in ay xilka ka xayuubiyeen, gudoomiyaha Guddiga doorashada Galmudug (SEIT) Maxamed Daahir Guulleed, ayaa gudoon cusub u doortay xoghayihii guddigaas, Maxamed Qaasim Turaabi.
Qoraal uu soo saaray, gudoomiyaha xilka laga qaaday, ayuu ku sheegay mid been abuur ah, waxaana qorshahaas uu ku eeddeeyey in ay ka danbeeyaan xubno guddiga ka tirsan, oo sida uu hadalka u dhigay diiddan in doorasho xalaal ah ay ka dhacdo Galmudug.
Guddiga xallinta khilaafaadka, ayaanan weli ka hadlin khilaafka ka dhex aloosan guddiga doorashada Galmudug, waxaase laga dhursugayaa natiijada go'aanka ay ka gaaraan is faham waaga taagan, oo iminka cirka isku shareeraya.
Khilaafkan oo shaac baxay maanta, ayaa la sheegayaa inuu yimid, kadib fara-gallin uga timid xubnaha guddida, dhanka madaxtooyada Soomaaliya, kuwaa oo aan ku qanacsaneyn xubnaha guddiga qaarkood, maadaama ay rabaan in ay boobaan doorashada ka dhaceysa Galmudug.